निर्माता राजु केसी चलचित्र लभबाट चलचित्र यात्रा सुरुवात गरी त्यसपछि प्रेमपूजा, चेली, भरिया, दाइजो, अग्निपरिक्षा आदि हुँदै नेपाली चलचित्र जगतमा ३० वर्षको अनभव बटुली सकेका छन । हाल नेपाल फिल्म एण्ड कल्चर एकेडेमीको महासचिव रहेका उनी यतिबेला नेपाल इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टिभल (निफ) को आयोजनामा व्यस्त रहेका छन । प्रस्तुत छ निर्माता केसीसँग प्रजना राइले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश–
अहिले हाम्रो नेपाल इन्टरनेश्नल फिल्म फेस्टिभल (निफ) भन्ने छ । त्यसको काममै व्यस्त छु । हामीले यही फेब्रुअरी १३ देखी १७ सम्म फेस्टिभल गर्दैछौँ । यसमा बढी मात्रामा चीन, इण्डिया, अमेरिका, जापान, रसिया आदि लगायतका देशहरु पनि आबद्ध छन् । यसमा ६० वटा देशबाट ५०० वटा सिनेमाहरु आएको छ । हामीले देखाउन पाउने फिल्महरु २२ सय मिनेट देखी २६०० मिनेट सम्म मात्रै भएकोले ५०० वटा सिनेमाबाट ८० वटा मात्रा सर्टलिस्टमा राखेका छौँ । यसमध्ये फूल लेन्थ मूभि १५ वटा छ । इन्टरनेश्नलमा फूल लेन्थ मुभि र डकुमेन्ट्री छ । नेपाल पानोरोमामा सर्ट मुभि र फूल लेन्थ मुभि छ । यस्मा पनि दुइवटा नेश्नल र इन्टरनेश्नल क्याटोगरी हुन्छ । नेश्नल फिल्महरु इन्टरनेश्नल फिल्महरुमा भिड्न पाउनेछ । र उत्कृष्ट फिल्महरुलाई नगद पुरस्कार तथा अवार्ड दिने तयारी गर्दैछौँ ।
नेपाल इन्टरनेश्नल फिल्म फेस्टिबल (निफ) भनेको के हो ? यस्ले के के गर्छ ?
यो निफ भनेको नेपाली फिल्मलाई ,नेपाली संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिन लागि पर्ने संस्था हो । हाम्रो देश यसै पनि सानो भएकोले नेपाली फिल्मको मार्केट कहिल्यै माथी गएन । त्यसकारण यसले नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याइदिने काम गर्दछ । दर्शकलाई फिल्म हेर्ने संस्कारको विकास गराउँदछ । फिल्म क्षेत्रमा काम गर्न चाहने तर पहुँच नपुगेकाहरुको लागि अथवा सर्वर कहाँबाट लिने को बाट लिने थाहा नभएकाहरुको लागि पुलको काम पनि गर्दछ । । हाम्रो नेपालको एनएफसिए भन्ने संस्था भएसँगै चाइनाको बेल्ट एण्ड रोड फिल्म फेस्टिबल भन्ने छ त्यसमा ३८ वटा देश आबद्ध छन । त्यसमा हाम्रो निफ पनि आबद्ध छ । नेपाली निर्माता निर्देशकहरुले बनाएको मौलिक फिल्मलाई त्यहाँ मार्केटिंग गर्दिने काम पनि गर्दछ । हाम्रोमा लेखनको समस्या भएकोले स्क्रिन राइटिंगको लागि कार्यशाला गोष्ठी पनि गर्दछौँ । निफले चलचित्र विकासबोर्ड सँग मिल।े चित्लांगमा ७ दिने कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियौँ । सो गोष्ठीमा हलिउडबाट र बलिउडबाट जेफ मोनाहान र रोविन भट्ट आउनुभएको थियो । त्यहाँ भाग लिने सहभागीहरु अहिले निफ सँग जोडिन आउनुभएको छ । हामो वर्षमा कम्तिमा २,३ वटा सम्म वर्कशप गर्ने योजना छ । हामी त्यसरी लागिरहेको छौँ । फेस्टिभल सकिएपछि सायद पहिला लमजुङ्गमा स्क्रिनराइटिङ्ग गर्छौ । त्यसपछि हामी रारा तालमा गर्ने योजना छ । आर्थिक पक्ष राम्रो भएछ भने हामी गर्छौ ।
नेपालमा फिल्म क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाली फिल्म क्षेत्र धराशायी छ । त्यस्को लागि हामी फिल्मकर्मी पनि दोषी छौँ । किनभने हाम्रो देश विविध संस्कृति भएको देश हो तर हामीले कहिल्यै पनि हाम्रा मौलिक कथाहरुलाई उत्थान गर्न सकेनौ । हाम्रो देशमा १२९ वटा जातजाती छन् । ती जात जातीका आ आफना मौलिक कल्चरहरु छन् आ आफना मौलिक भाषाहरु छन् । कहिल्यै पनि हामीले ती मौलिक कल्चरहरुलाई फिल्ममा उत्थान गर्ने काम नै गरेनौँ । जबसम्म आफनो देशको आफनो माटो सुहाउँदो अग्र्यानिक कथाहरुलाई उठाइदैन तबसम्म नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन पनि सकिदैन । र हाम्रो फिल्म उद्योगले प्रगति पनि गर्दैन । पुरानोशैलीको फिल्म नै बनाइरहने हो भने नेपाली फिल्म उद्योग बन्द गरेहुन्छ । यहाँ फिल्म बनाउने निर्देशकहरु पनि कुनै फिल्मको सुटिंग हेरेर आएका छन् । बिना अध्ययन, बिना अनुभवको भरमा काम गर्ने निर्देशकहरु प्रशस्त छन् । एकता छैन । खुटा तान्ने प्रवृत्ति छ । कलाकारप्रति भड्किलो लगानी छ । नेपालमा इन्टेन्सली म फिल्म राम्रो बनाउँछु भनेर लाग्ने मान्छेको खाँचो छ । काम नजानेको तर नाम कमाउनको लागि मात्र पनि आउनेहरु छन् । विदेशी फिल्मको प्रभाव धेरै छ ।
नेपालमा सिर्जनात्मक निर्देशकहरुको कमि हो ?
निर्देशक भनेको फिल्मको प्याकेज हो । त्यसकारण निर्देशक सिर्जनात्मक हुनुपर्दछ । यहाँ कुनै निर्देशकहरुलाई तपाईले यो भन्दा अगाडी के काम गर्नुभएको थियो भनेर सोध्यो भने मैले सुटिङ्ग हेरेको थिए भन्छन् । मैले सुनेको छु त्यस्ता कुराहरु सुटिङ्ग हेरेको भरमा निर्देशक बनिन्छ त । निर्देशक बन्न पढ्नुपर्यो अथवा सिनेमा क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव बटुलेर आउनुपर्यो ।
भएको हाम्रा निर्देशकहरुमा के समस्या छ भने उनीहरुलाई काम गर्न हतार छ । तर राम्रो काम गर्न हतार छैन । एउटा प्रोड्युसर आयो पाँचदिनमा स्किृप्ट लेख्यो अनि फ्लोरमा गइहाल्यो । त्यो भएपछि चलचित्र कहाँबाट राम्रो बन्छ । कमसेकम कुनै विषय उठाइन्छ भने त्यस्को रिसर्च गर्नुपर्यो । कम्तिमा ६ महिना त्यो विषयमा रिसर्च गर्नु पर्यो ।
हुन त अर्को समस्या यहाँ के छ भने निर्माताले कलाकारलाई २० लाख दिन तयार हुन्छन् तर निर्देशकलाई २ लाख दिन पनि गाह्रो मान्छन् । रिसर्च गर्न ६ महिना लाग्छ भने ६ महिना उस्ले घर पाल्न पर्छ ।
नेपाली चलचित्रलाई चलचित्र उद्योग भन्नेकुरा मै समस्या छ भन्छन् नि ?
यस्तो छ हामी चलचित्रकर्मीहरु आफैमा रमाउने मान्छे हो । हामी आफै नै उद्योग भनेर दंग छौ । तर अहिले सम्म नेपाली चलचित्रक्षेत्रलाई उद्योगको दर्जा दिइसकेको छैन । वर्षौ भइसक्यो हामी चलचित्रक्षेत्रलाई उद्योग बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छौँ । चलचित्रलाई साँस्कतिक उद्योग अन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा चै भएको छ । तर त्यो कहिले पुरा हुन्छ थाहा छैन । किनभने त्यसको लागि लड्नलाई हामीले पनि देशको लागि केही गर्नु पर्छ । यो विषयमा पनि हामी चलचित्रकर्मीहरु दोषी छौँ । र सरकारले चलचित्रक्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ किनभने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुमा चलचित्र उद्योगबाट उठेको करले देश चलाइरहेका छन् । तर हामी चलचित्रकर्मी कर तिर्न भनेपछि मरे जस्तो गर्छौँ । हामीले सरकारलाई कर तिरेर योगदान दिदैनौ भने सरकारले चै हामीलाई किन हेर्छ ?
चलचित्रक्षेत्रको विकास गर्नका लागि चै के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
हामीकहाँ साधनस्रोतको अलिक कमि नै छ । अर्कोकुरा हाम्रो सोँचमा कमी छ । फिल्म राम्रो चल्ने भनेको कथावस्तले हो । जबसम्म कथावस्तु राम्रो हुँदैन तबसम्म चलचित्रक्षेत्रको विकास हुनसक्दैन । हामीले नेपाली चलचित्रक्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनको लागि हाम्रो कथावस्तुहरु उठाउन जरुरी छ । जबसम्म कथा बनाउने दिमाख राम्रोसँग चल्दैन तबसम्म नेपाली चलचित्रक्षेत्र माथि जाँदैन ।
नयाँ पुस्ता र पुराना पुस्तामा मेकरमा भएको ग्यापलाई पनि पुर्नु पर्दछ । यदि त्यसो भएमा नेपालमा राम्रा राम्रा सिनेमा बन्छ । नेपालमा सम्भावनाहरु धेरै छ इच्छाशक्ति भएको मान्छेको खाँचो छ । विदेशी सिनेमालाई कोटा प्रणाली लागु गराउनुपर्छ । प्रत्येक सिनेमा घरहरुमा वर्षको यति दिन चै सिनेमा चलाउनैपर्छ भन्ने सिस्टम बनाउनुपर्छ । सेन्सरसीप लागु गराउनुपर्दछ ।
कतिपय राम्रा कथावस्तुमा बनेका सिनेमाहरु नि फ्लप भइरहेका छन् ?
यस्तो छ नेपालमा चै के छ भनेदेखी हामी विदेशी नक्कल गर्ने चलन छ हाम्रोमा । र हाम्रो जम्मा जनसंख्याको २ प्रतिशतले मात्र फिल्म हेर्छन् । हाम्रोमा सिनेमा हेर्ने संस्कार नै छैन । हामीले निफ गरिरहेका छौँ । त्यहाँ हाम्रो प्यानल डिसकस हुन्छ त्यहाँ यी कुराहरुलाई पनि हामी राख्छौँ । हामी वर्कशपहरु गर्छौ । हामी गाउँमा गएर वर्कशप गर्छौ । हामी बाहिर बाहिर गाउँमा गएर वर्कशप गर्ने कारण भनेको के हो भने एउटा सिनेमा संस्कारको विकास होस भन्ने चाहना हो । सिनेमा हेर्ने संस्कार नै छैन । हामीले दाल तरकारी किन्नको लागि जसरी बजेट छुट्याउँछौ नि बाहिर तिर सिनेमा हेर्नका लागि बजेट छुट्याउछन् दर्शकहरुले । जस्तो साउथ इण्डिया मुम्बई भन्दा सानो इन्डस्ट्रि हो तर मुम्बइको भन्दा तेब्बर व्यापार हुन्छ । किनकि साउथमा ९९ प्रतिशत मान्छेहरुले सिनेमा हेर्छन ।हामी सरोकारवालाहरुले के गर्न जरुरी छ भने सिनेमा संस्कारको विकास चै गर्नुपर्छ । नेपाली सिनेमा हेर्ने बानी बसाल्न लगाउनुपर्छ ।
चलचित्रक्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ कलाकारहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म उहाँहरुलाई नआउनु चै भन्दिन । आउनुहोस तर धर्य गर्न सक्ने क्षमता लिएर आउनुहोस । अर्कोकुरा पढेर आउनुस । आफुले यस्तो किसिमको फिल्म बनाउछु भनेर भिजन लिएर आउनुस । जस्ले नेपाली मौलिक विषयहरुलाई उठाएर काम गर्न सक्छ त्यो मान्छेहरुको लागि भविष्य राम्रो छ । त्यस्तो मान्छेहरुलाई नेपालमा मात्र इन्टरनेश्ुनल मार्केटमा राम्रो भविष्य छ ।
नेपाली चलचित्र कस्तो भएको हेर्न चाहनुहुन्छ ?
भोलीको दिनमा एउटा त्यस्तो खालको चलचित्र आश्रम चै बनिदियोस जबकि पुराना आफ्ना साथी भाई सबै एकैठाउँमा बस्न पाइयोस । सबैजना त्यही बसेर फिल्मकै कुरा गर्न पाइयोस फिल्मकै बारेमा छलफल गर्दै मर्न पाइयोस भन्ने चाहना छ । एउटा चलचित्र आश्रम चै बनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यो अभियानमा पनि लागिरहेको छौँ । भने अहिले नेपाल साँस्कृतिक ग्राम को अभियानमा पनि लागिरहेको छौँ । त्यो साँस्कृतिक ग्राम चै कस्तो भने एउटा विदेशी नेपाल आउँछ उस्ले सबै नेपाल घुम्न नभ्याउन पनि सक्छ । त्यो ग्रामभित्र छिरेपछि उस्ले सिंगो नेपाल उ त्यही बाट बुझछ । त्यसमा पनि लागिरहेको छौँ ।